စက်တင်ဘာလ 2016 | 30 ၏စာမျက်နှာ 78 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 30)
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီသာစာရင်းသွင်းသူများ City, State Mobile, AL Duration 1 day - 9/28 လစာမရရှိသေးပါ 09/20/16 တွင်တင်ခဲ့သောအလုပ်အကိုင် 09/28/16 ဖြင့်လျှောက်ထားပါဝက်ဘ်ဆိုက်မရှိပါကမျှဝေပါအလုပ်အကိုင်အကြောင်းဓာတ်ပုံများစစ်ဆေးရန် PA ကိုရှာဖွေနေသည်။ နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် / အပန်းဖြေပြပွဲများတွင်မော်ကွန်းတိုက်အသုံးပြုမှုအတွက်အခြားပစ္စည်းများ။ PA သည်လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်နှင့် ...
လက်ထောက်ကင်မရာ / မီဒီယာ Manager ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Phoenix မြို့, AZ Duration:2ရက်,9/ 24 / 09 20 / 16 / 09 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply တစ်ဦးရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted 24 / 16 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘစတင်သည် တစ်ဦး2ရက်ကြာ sizzle များအတွက် AC / မီဒီယာ Manager ကို။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? >> ပိုအတွက် Sign ကျေးဇူးပြု.
အသံရောနှောကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Phoenix မြို့, AZ Duration:2ရက်,9/ 24 / 09 20 / 16 / 09 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply w ဒေသခံတစ်ဦးရောနှောရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted 24 / 16 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘစတင်သည် / နှစ်ရက်ကြာ sizzle ရိုက်ကူးဘို့ဂီယာ။ မူလစာမျက်နှာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအတွေ့အကြုံကိုတစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? အတွက် Sign ကျေးဇူးပြု. ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီသာစာရင်းသွင်းသူများ City, State Douglasville, GA Duration 1 day - 9/26 လစာမရရှိသေး 09/20/16 တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင် 09/26/16 ဖြင့်လျှောက်ထားပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မရှိပါ။ မျှဝေပါအလုပ်အကိုင်အကြောင်းဓာတ်ပုံများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် PA ကိုရှာဖွေနေသည်။ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် / အပန်းဖြေပြပွဲများတွင်မော်ကွန်းတိုက်အသုံးပြုမှုသည်။ PA သည်လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်နှင့်ကားတစ်စီးကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိရမည်။ အခုပဲစာရင်းသွင်းလိုက်ပါတော့ ...
ကင်မရာအော်ပရေတာကုမ္ပဏီသာစာရင်းပေးသွင်းသူများသာမြို့၊ ပြည်နယ်အလက်ဇန္ဒြီးယား၊ KY Duration 1 နေ့ -9/ 21 လစာ $ 600 နေ့နှုန်းနှုန်း 09 / 20 / 16 တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင် 09 / 21 / 16 မှလျှောက်ထားသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မရှိပါ - အလုပ်အကိုင်မျှဝေခြင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန် အလက်ဇန္ဒြီးယား, KY အတွင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် b-roll ရိုက်ကူးခြင်းတစ်ရက်အတွက်စင်စင်နာတီဒေသရှိသေနတ်သမား။ ကျနော်တို့စာရင်းတစ်ခုပေး, ဒါပေမယ့်င ...
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး Technician အ
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး Technician အကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Stamford, မှန် CT Duration: 1 တစ်နှစ်လစာ TBD ယောဘသည်ဤအ Technician အအသံဖိုင်နှင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်အလုပ်အကြောင်း 09 / 20 / 16 ဝဘ်ဆိုဒ်မပေးထားဝေမျှမယ်အပေါ်တင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ MediaFlex ၏စစ်ဆင်ရေးပါဝငျသညျ။ ဤသည် Technician အ waveform မော်နီတာ, vectorscopes နှင့်ဖတ်ရှုခြင်းအတွက်တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည် ...
CX အရောင်းအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA အတွေ့အကြုံကိုယောဘကိုအပေါ်မှီခို Duration: အချိန်ပြည့်လစာ 09 / 20 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုကျနော်တို့ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံမှဦးဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် HD ကိုကင်မရာပစ္စည်းကိရိယာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများမှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများထုတ်လွှင့်။ ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးမှအရောင်း, ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော် ...
ကင်မရာအော်ပရေတာကုမ္ပဏီသာစာရင်းသွင်းသူများသာမြို့၊ ပြည်နယ်ဘာန်ဂန်ကောင်တီ၊ NJ Duration9/ 23 သို့မဟုတ်9/ 24 လစာ TBD - ကျေးဇူးပြု၍ တစ်နေ့တာနှုန်းထားများပေးပို့ပါ 09 / 20 / 16 တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင်အလုပ်အကိုင်မျှဝေခြင်းကျွန်ုပ်တို့အလုပ် Bergen ကောင်တီ NJ ရှိ 09 / 24 သို့မဟုတ် 16 /9တွင်အတွေ့အကြုံရှိသော Camera Op / one адамရိုက်ကူးခြင်းအတွက်တစ်ရက်အတွက်လိုအပ်သည်။ အတှေ့အကွုံပစ်ခတ်မှုရှိရမည် ...
30 ၏စာမျက်နှာ 78«ပထမဦးစွာ...1020«2829303132 » 405060...နောက်ဆုံး»